Izindaba - Uyini igwebu lethusi nokusetshenziswa kwalo?
Igwebu lethusi yinto entsha esebenza ngemisebenzi eminingi enenombolo enkulu yezimbobo ezixhunyiwe noma ezingaxhunyiwe ezisatshalaliswa ngokulinganayo kumatrix. Igwebu lethusi linokuqhuba okuhle nokungathambeki kahle. Inezindleko eziphansi nokusebenza okungcono kune-nickel foam futhi ingasetshenziswa ukulungisa izinto zebhethri ze-anode (carrier), i-catalyst carriers nezinto zokuvikela ugesi.
Igwebu lethusi linezinto ezinhle zomshini nokusebenza kahle, ukusebenza kahle kukagesi nokushisa futhi isakhiwo sinenani elikhulu lama-pores, kepha ukumelana kwe-alkali, amandla we-tensile nokuthambeka kwethusi lensimbi kusekhona, kuhambisana nokusebenza kahle kwalo kokuvikela ugesi nomsebenzi wokumunca umsindo. , igwebu lethusi linezinhlobonhlobo zezicelo.
1. Izinto ze-electrode
Ngenxa yokuqhuba kwayo okuhle kakhulu, ingasetshenziswa njengempahla yohlaka lwe-electrode yamabhethri amasha. Njengokukhetha okuhle kakhulu komqoqi we-electrode fluid we-double-layer capacitor, futhi sekuyimakethe enkulu efihliwe yezicelo zethusi ze-foam.
Njengempahla ye-electrode yokuthola kabusha i-electrolysis yamanzi aqukethe amanzi angcolile, igwebu lethusi nalo likhombisa ukusebenza kwalo okuhle futhi linethemba elibanzi lokuthuthuka kulo mkhakha.
Ekuphenduleni kwamakhemikhali okuphilayo, ukusebenzisa indawo enkulu ethize ekwakhiweni kwento yethusi amagwebu ukumiselela isikhundla sokushaya isibhakela sethusi ipuleti yamakhemikhali, lolu cwaningo luthole imizamo eminingi nezibonelo eziphumelelayo, futhi lunethuba lokusebenza ngokoqobo.
Ukusebenzisa igwebu lethusi njenge-photocatalytic air purification carrier kungenye indlela ephumelelayo.
3. izinto ezishisayo conductive
Igwebu lethusi lisetshenziswa njengezinto ezilahla ilangabi ezintweni eziphambili zokulwa nomlilo emazweni amaningi aphesheya, ikakhulukazi njengemishini yokuhlukanisa ilangabi. Igwebu lethusi likhombisa ukusebenza kwalo okuhle kakhulu ngenxa yokuhamba kwalo okuhle kakhulu okushisayo, okwenza ukuthi libe yinto enhle kakhulu ethwala amalangabi.
Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa njengezinto zokushisa ukushisa kwama-motors nezinto zikagesi,
4.Ukuncishiswa komsindo nezinto zokuvikela
Ukusakazwa kwegagasi lomsindo kuzosabalalisa ukubonakala ebusweni besakhiwo se-foam sethusi, futhi ukuqina kwegagasi lomsindo kuzokwenziwa buthaka kakhulu ngemiphumela yokwandiswa kokuthulisa nokuthulisa i-micropore.
Ama-molecule e-foam ethusi ayafana nethusi lensimbi, ngakho-ke ukusebenza kwawo okuvikelayo akuguquki. Njengoba impahla yokuvikela ithusi lensimbi isondele kuleyo yesiliva lensimbi, futhi iyinto enhle kakhulu yokuvikela ugesi.
5. Hlunga izinto
Ithusi lensimbi alinangozi emzimbeni womuntu, futhi igwebu lethusi linezici ezinhle kakhulu zokwakheka, ngakho-ke igwebu lethusi njengesihlungi sezokwelapha lithole impumelelo enkulu ekusebenzeni okusebenzayo.
Ngokufanayo, njengezinto zokuhlanza amanzi, igwebu lethusi likhombisa nokusebenza okuhle kakhulu kumadivayisi wokuhlanza amanzi.
6.Fluid ingcindezi sesikhashana impahla
Ngenxa yobuningi besakhiwo sayo, igwebu lethusi lidlala indima enkulu ekusabalaliseni nasekuhlanzeni uketshezi. Lokhu kwenza kube njengengxenye yokwehla kokusebenza okusetshenziswe kuzinsimbi ezahlukahlukene zokwehlisa ingcindezi nezinga loketshezi.
Ukuqina, ukumelana nokugqwala kwensimbi yensimbi nakho kube yizinzuzo zegwebu lethusi ekusetshenzisweni kwezinsimbi.
I-Beihai Composite Materials Co., Ltd.ngumkhiqizi oqeqeshiwe wemikhiqizo yensimbi yensimbi e-china ehlanganiswe ne-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa.
Okukhipha minyaka yonke igwebu lethusi kungamamitha ayi-1.8 million. Square.
Siyakwamukela kuzwane-imeyili ngolwazi oluthe xaxa info@metalfoamweb.com.
Amasampula amahhala ayatholakala uma ucelwa.